Wefti Saynis Ah Oo Gaaray Saldhigga Turkiga Ee Antarctica | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAJacaylkuWefti Saynis ah ayaa Gaaray Saldhigga Turkiga ee Antarctica
23 / 02 / 2020 Jacaylku, DUNIDA, GUUD
guddiga sayniska ee antarctic-ka ayaa gaadhay turk ussune
Turkey by duulaan 4 Antarctic Science ka go'an abaabulay baxay macnaha guud ee kooxda, taas oo gaadhay Science Turkish meelgaarka ah kabo faras Island Air Base ah waxa uu ku yaalaa. Hogaamiyaha Safarka Dr. Ersan Başar wuxuu sheegay in safarkaas kadib, oo ku soo maray duruufo adag, ay cagta saareen qaaradda oo howlihii cilmiga ahaa ay bilaabeen.
Wefdiga Sayniska Turkiga, oo sii waday safarkiisa ka dib markii la aasaasay Xarunta GNSS ee Jasiiradda Dismal Island ee Antarctica, ayaa gaartay saldhigga ku-meelgaarka ah ee Sayniska Turkiga, kaasoo shaqa bilaabay sanadkii hore. Kadib markii guddiga saynisku ay gaareen saldhiga, heesta calanka ee turkiga waa la wada aqriyay calanka turkigana waxaa loo sawiray jagada. Qofka soo dhaweynaya guddiga sayniska ee jasiiradda; Waxaa jiray penguin iyo shaabado wadaaga saldhigga iyo nawaaxigeeda kooxda Turkiga.
Weftigu waxay ku wargeliyeen Wasiirka Wershadaha iyo Teknolojiyada Mustafa Varank, oo raacay dhammaan marxaladaha safarka daqiiqad daqiiqad, inay gaadheen saldhigga.
Guddiga sayniska mar dambe Dr. Isaga oo hogaaminaya Ersan Baar, wuxuu safar ku aaday gobolka. Weftiga saynisku waxay sameeyeen daraasad suurta gal ah oo ku saabsan gobolada halkaas oo ay cilmi baadhis ku samayn doonaan. In kasta oo ay jiraan duruufaha adag ee dabiiciga ah iyo duruufaha isbeddelka saadaasha hawada xilligan, Hoggaamiyaha Dalxiisku wuxuu sheegay in socdaalku si guul leh u socdo. Dr. Ersan Başar wuxuu yidhi, "Waxaan ka dhisi doonnaa laba saldhig GNSS oo ku yaal Jasiiradda Horseshoe. Isla mar ahaantaana, waxaan ilaalin doonnaa xarunteenna saadaasha hawada, oo aan aasaasnay ​​sannad ka hor. Daraasadaha cilmiga ah, muunad harada iyo badweynta ayaa la sameyn doonaa. Intaa waxaa u dheer, ciidda, dhagaxa iyo samballada dhirta ayaa laga soo qaadi doonaa dhulka. Ka sokow aqoonyahanadeena, waxaan haysannaa laba marti sanadkaan. Laba saynisyahano oo ka socda Belarus iyo Bulgaria ayaa iyaguna nala shaqeeya. Waxaan ahmiyad weyn siineynaa iskaashiga wadamada kale. ”
Antarctica, oo ah qaarada 14-aad ee ugu weyn adduunka oo leh 5 milyan oo kiiloomitir laba jibbaaran, waxay ku taalaa qaybta koonfureed ee Hemisphere Koonfurta. 75 boqolkiiba dhammaan kaydka biyaha nadiifka ah ee adduunka waxay ku yaalliin Antarctica. Aagga barafka badda, oo gaadhaaya ilaa 18 milyan oo kiiloomitir laba jibbaaran xilliga jiilaalka, wuxuu ku dhacayaa 2-3 milyan oo kiiloo mitir laba jibaaran xagaagii. In kasta oo barafka badda ahi isku dheellitiro nidaamka cimilada, wuxuu bixiyaa isu-urursiga algae, oo bilow u ah silsiladda cuntada, oo noqota hoy iyo goob taranta waxyaabo kala duwan oo nolosha ah.
Ka sokow khayraadka dabiiciga ah ee hodanka ah ee ay ka kooban tahay, Antarctica waxay leedahay muuqaalka “shaybaarka dabiiciga” ee cilmi baarista cimilada, juquraafiyada, bayoolajiga, cilmiga dhulka iyo cilmiga kale ee badan. Waxaa lagu qiyaasaa inay jiraan kayd macdan qani ah oo qaaradda ku yaal, halkaas oo saynisyahannadu cilmi-baaris ku sameeyaan aagag kala duwan. Qaaraddu waxay hoy u tahay Penguins, shaabab, whales, shimbiro iyo xayawaanno kala duwan.
In kasta oo ku dhawaad ​​kalabar saldhigyadu ay ku yaalliin Jasiiradda Antarctic Peninsula, oo ay fududahay in la helo oo loo habeeyo nolosha, waxaa sidoo kale jira saldhigyo ku yaal gobollada leh xaalado adag sida South Pole Point. In kasta oo saldhigyada sayniska badankood ay shaqeeyaan kaliya bilaha xagaaga, saldhigyada qaar ayaa la heli karaa sanadka oo dhan. Turkey ayaa sidoo kale waxaa lagu sameeyo shaqada sayniska muhiim ah in Jacaylku sannadihii la soo dhaafay.
bacdi madaxtooyada, Wasaaradda Warshadaha iyo Technology u xil saaran TUBITAK MAM Polar Research Institute of isuduwidda in 4aad National Science duulaan, taas oo dejisa Turkey, si ay u kordhiyaan cilmi ah jibbaaranaha Jacaylku ku meel gaar ah ayaa la aasaasay ah ujeedooyinka cusub heerka iyo la taliye ka badnayn xaalada dalka.
Tababarrada Duulista Sayniska ee Antaractic-ka ayaa la soo gabagabeeyey
Xarunta Cilmi-baarista Konya waxay martigalisay 1 Million 225 Thousand Curiosities
7. Bandhigga Sayniska Konya wuxuu furayaa Albaabooyinkiisa Cilmiga Sayniska
Wafdiga RAI iyo Wafdi ka socda TCDD ayaa isugu yimid magaalada Malatya
Sarkaalka Gaadiidka-Sen Sen Delegation booqday TÜVASAŞ
Wakiilka Wasaaradda Gaadiidka ayaa booqday DATEM
Ciidamada badda ee Turkiga oo la kulmay Turkiga
Albayrak, Madaxweynaha Türk Ulasim-Sen, ayaa yidhi,
Metrobus Foosto ee Ankara waxay gaartay 100
Madaxa Sarkaalka Gaadiidka-Sen ayaa la kulmay shaqaalaha TCDD ee Kushcenneti iyo Cattle
Wasaaradda Gaadiidka si Loo Dhiso Laba Gawaarida Erzincan iyo Erzurum
Cankesen oo booqasho ku yimi Uşak
Halkan waxaa ku yaal saldhig asphalt ee Izmir
Isticmaalka Koofurta Xawaaraha Koonfur-Bari ee loo yaqaan "Logistics Speed ​​Train" si uu u noqdo Saldhig Saynis
Wasaaradda Warshadaha iyo Tiknoolajiyada